Maxkamad sare oo ku celisey go'aankeedii ahaa shuruudaha aqoonsiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soomaali dhawaantaan ka bannaan-baxday sidii wax looga bedeli lahaa xeerka qaraabada sidii la isugu keeni lahaa. Sawirle: Cali Maxamed Casiir.
Maxkamad sare oo ku celisey go'aankeedii ahaa shuruudaha aqoonsiga
Publicerat fredag 13 maj 2011 kl 11.49
Maalintii shaley oo khamiis aheeyd ayaa maxkamadda saree dalkaan Iswiidhan waxay mar labaad soo saartey go'aan dhaba tus ah, kaas oo ah in lagu sii socdo go'aankeedii hore oo ahaa, in dadka ehelkooda dalkaan Iswiidhan loo keenayo, lagu xiro shardi ah in ay heeystaan baasaboor iyo waraaqo aqoonsi oo la aqoonsan yahay.
Maxkamadda ayaa intaas ku dartey in haddii la rabo in dadkaas la siiyo xuquuqda bulshada midoowga yurub ku dhaqan ama daganaashaha ku leh sidii ilmahooda loogu keeni lahaa , go'aan siyaasadeed ayaa loo baahan yahay , sidaasna waxaa maanta qorey wargeeyska maalinlaa ee Dagens Nyheter.
Sida la wada ogsoon yahay soomaalida dalkaan dagan ayaa ah dadka ugu badan oo uu go'aanka maxkamaddaasi saameeyey ,laga soo bilaabo bishii maarso ee sanadkii hore.
Baasaboorka iyo waraaqaha aqoonsi ee soomaaliya ayuusan dalkaani aqoonsaneeyn ,maadaama wax dawlad ahi aysan soomaaliya ka jirin labaatankii sanee la soo dhaafey.
Qiyaastii dhallaan soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 1 500 oo ilmood s ,waalidiintoodna joogaan dalkaan Iswiidhan ayaa loo diidey codsiyadoodii la xiriirey ,in ay eheladooda la midoobaan taas oo sabab looga dhigey in aysan heeysan waraaqa aqoonsi iyo baasabooro la aqoonsan yahay.
Mikael Ribbenvik oo ah madaxa shuruucda ee hey'adda socdaalka ayaa sheegey, in go'aanka maxkamaddu , hey'addayada farayo in aanaan kooxna ka dhaafin shuruudahaas la xiriira waraaqaha aqoonsiga.
Mikael Bibbenvik ayaa intaas ku darey in arrinkaani hadda yahay mid siyaasadeed ,waa haddii la rabo in qofku helo xaqqa uu u leeyahay in ehelkiisa uu la midoobo, lagana hormariyo shuruudahaan la xiriira baasaboorada iyo waraaqaha aqoonsiga .
Dhawaantaan ayey aheeyd markii dawladda iyo xisbiga cagaaran ee Miljöparti-gu, heshiis wada gaareen la xiriira in la fududeeyo shuruudaha ad-adag ee lagu xirey soomaalida rabta in ay dalkaan Iswiidhan keensadaan eheladooda ama qaraabadoodu dibadda uga maqan.
Dhanka kalana maalintii shaley ayey Mika'ila Waltersson oo ka tirsan xisbiga cagaaran ee miljöpart-gu ku sheegtey wareeysi ay idaacadda P 1-ku la yeelatey in xisbigeedu rajo weeyn ka qabo in go'aano lagu diirsadaa ka soo baxaan wadalka u dhexeeya xisbigeeda iyo dawladda kaas oo la xiriira sidii soomaalida loogu sahli lahaa in ay dalkaan keensadaan eheladooda dibadda uga maqan